चिनीको भाउ बढ्यो, नयाँ मूल्य कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
चिनीको भाउ बढ्यो, नयाँ मूल्य कति ?
काठमाडौं, असोज १२ । सरकारले चिनी आयातमा बन्देज लगाएदेखि बजार मूल्य बढ्दै गएको छ। सरकारले बन्देज लगाएको एक सातामा विराटनगरमा चिनीको मूल्य एक केजीमा १५ रुपैयाँ बढेको हो।
व्यापारीले क्रृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाएका हुन्। गत भदौ ३१ गते बेको संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चिनीको आयातमा असोज ४ गतेदेखि परिमाणत्मक बन्देज लगाएको छ।
याे पनि पढ्नुस चिनीमा भन्सार बढाउने प्रस्ताव
एक साताअघि केजीको ६५ रुपैयाँमा पाइने चिनी अहिले ८० रुपैयाँ पुगेको छ। विराटनगरसँगै जोडिएको भारतीय बजार जोगबनीमा प्रतिकेजी ५४ मा पाइने चिनी यहाँका सर्वसाधारण २६ रुपैयाँ महँगो तिर्न बाध्य छन्। विराटनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटले भने चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ५९ यथावत राखेको छ। कान्तिपुरमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस थाहा पाउनुहोस् सुगर पत्ता लगाउने तरिका
ट्याग्स: Chini, sugar